ဂူဂဲလ် - ဘာသာစကားမျိုးစုံအတွက် Subdomain or Subfolder | Martech Zone
ဂူဂဲလ် - ဘာသာစကားမျိုးစုံအတွက်ဒိုမိန်းခွဲ (သို့) ဖိုင်တွဲငယ်များ
တနင်္လာနေ့, သြဂုတ်လ 20, 2012 အင်္ဂါနေ့, နိုဝင်ဘာလ 24, 2020 Douglas Karr
Google Search Console တွင်ကိုင်တွယ်ရန်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည် querystring parameters တွေကို။ ၎င်းတွင်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာဘာသာစကားညွှန်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
ယနေ့အထိကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်ဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသောစာမျက်နှာများကိုဂူးဂဲလ်မှခွဲခြားနိုင်မည်ဆိုပါက၎င်းသည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်အားဘာသာစကားမျိုးစုံပံ့ပိုးမှုပေးသည့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအမြဲထင်ခဲ့သည်။ ငါတို့ SEO ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးနောက်, ငါမှားကြောင်းပေါ် Nikhil Raj, ဒီ parameters တွေကိုအပေါ်မကြာသေးမီကဂူဂဲလ်ဗီဒီယိုထဲမှာဒီသေးငယ်တဲ့ဘေးထွက်မှတ်စုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်မှာကွန်ရက်စာမျက်နှာတည်ဆောက်ပုံကိုပိုမိုလွယ်လွယ်ကူကူနားလည်စေရန်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုကူညီရန်အတွက် parameter များကိုမဟုတ်ဘဲ subdirectory သို့မဟုတ် subfolder ထဲတွင်ထားရန်ဖြစ်သည်။
At ဗီဒီယိုထဲမှာ 11:35 အောက်တွင် Maile Ohye ကထောက်ခံချက်ပေးသည် (လိုအပ်ချက်မဟုတ်ပါ) ။
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲမှတ်ထားပါ၊ သင့်တွင် WordPress ဆိုက်ရှိပါကစစ်ဆေးပါ WPML - အောက်ပါအင်္ဂါရပ်များနှင့်ပြည့်စုံသော Multi-language WordPress ပေါင်းစပ်မှု:
အလိုအလျောက် ID ကိုချိန်ညှိ
Klout ရမှတ်များအသစ်တီထွင်ခဲ့သည် ... ငါကကြိုက်တယ်!
Nikhil Raj ။ R ကို
20:2012 pm တွင်သြဂုတ်လ 2, 05
ဖော်ပြချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Doug! ဘာသာစကားမျိုးစုံ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာအခြားလင့်ခ် tag များနှင့် တွဲဖက်၍ Canonical tag ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်